Kooxda Man United oo qarka u saaran inay 85 milyan oo gini kula soo wareegto saxiixeedii saddexaad ee xagaaga – Gool FM
(Manchester) 10 Luulyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qarka u saaran inay 85 milyan oo gini kula soo wareegto saxiixeedii saddexaad ee xagaagan, kaasoo ah inuu yahay daafaca Harry Maguire.
Man United ayaa horay ula soo wareegtay Daniel James oo ay ka soo qaadatay Swansea City iyo difaaca qiimaha sare ku fadhiya ee Aaron Wan-Bissaka kasoo ay ka soo iibsadeen Crystal Palace, iyadoo labadaan heshiis ay kuga baxday lacag dhan 65 milyan oo gini.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo kooxdiisa Man United kula sugan haatan dalka Australia ayaa doonaya inuu sida ugu macquulsan u dhammaystiro saxiixiisa saddexaad ee xagaaga.
Kooxda Man Utd ayaa doonaya inay dagaal dhanka suuqa ah la gasho kooxda ay ku cotalmaan Magaalada Manchester City ee Man City, kuwaasoo sidoo kale doonaya saxiixa difaacan la yiraahdo Harry Maguire.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa la filayaa inuu xagaagan isaga tago garoonka King Power, balse kooxdiisa Foxes lagu naanayso ayaa ku doonaysa in laga siisto lacag dhan 85 milyan oo gini.
Yeelkeede, Man City ayaa la soo sheegayaa inay tartanka ciyaaryahanka isaga baxday maadaama ay qaali u aragto lacagta ay Leicester ku dalbanayso difaacan, taasina waxa ay albaabka u furtay in Man United ay la soo wareegto laacibkii hore ee kooxda Hull City.
Sida wararku ay sheegayaan kooxda Manchester United ayaa dalab ka kooban Marcos Rojo oo lagu daray 70 milyan oo gini ka gudbisay Harry Maguire, balse Leicester ayaa soo diiday maadaama ay doonayaan kaliya lacag kaash ah.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska The Sun ayaa maanta daabacay in kooxda Red Devils lagu naanayso ay diyaar u tahay inay bixiso lacagta kaashka ah ee ay Harry Maguire ku dalbanayso kooxda Leicester City.